पदक वितरणप्रति ओलीको व्यंग्य : रत्नपार्कमा बसेर वितरण गरेकोजस्तो छ ! « Nepal's number 1 Entertainment news portal
Published : 21 September, 2021 5:20 pm
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले आफ्नो विरोध नहोस् भनेर जसलाई पायो उसलाई पदक तथा विभूषण वितरण गरेको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सरकारले त्यसैगरी पदक वितरण गरेको भए खपिनसक्नु हुने टिप्पणी गरे ।
‘यति धेरै पदक कहिल्यै पनि वितरण गरेको थिएन । रत्नपार्कमा बसेर वितरण गरेकोजस्तो छ ह्वार ह्वार, म प्रधानमन्त्री भएको बेला यसरी वितरण गरेको भए ..ओ हो.. के हुन्थ्यो ? बुद्धिजीवी, नागरिक समाजले के भन्थे’, ओलीको प्रश्न छ । तर अहिलेको सरकारले यसरी वितरण गर्दा पनि सब चुपचाप कोहि केहि नबोली बसेको टिप्पणी गरे ।
उनले राजनीतिमा नैराश्य प्रदान काम सरकारले गरेको भन्दै निरङ्कुश राजतन्त्र लडेर मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रसम्म ल्याए पनि पुनः अहिले निराशा छाउने काम यो सरकारले गरिरहेको बताए । फरक प्रशंगमा ओलीले कम्युनिस्टहरू पावर केन्द्रित हुन्छन् भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको बताए ।
मेयर कुट्ने कार्यकर्तामाथि मुद्दा नचलाउन एमालेको आग्रह
ज्योतिनगर क्षेत्रको पहिरो अवलोकनमा गएका बुटवल मेयर शिवराज सुवेदीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउन नेकपा